Kenya Oo Ka Xumaatay Codsi Ay Golaha Amaanka U Gudbisay Oo Lagu Gacan Saydhay – HCTV
Ahmed Cige 0	August 30, 2019 8:14 pm
Nairobi, (HCTV) – Dowladda Kenya ayaa muujisay sida ay uga xuntahay go’aanka Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ay ku diideen inay cunaqabateyn adag ku soo rogaan kooxda xagjirka ah ee Soomaaliya ee Al Shabaab.
Xoghayaha Joogtada ah ee Arimaha Dibada Macharia Kamau ayaa u sheegay Warbaahinta The EastAfrican in uu aad uga xunyahay in wadamada sida aadka ah ay u weeraraan Al Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka ah aanay taageerin soo jeedinta Kenya.
“Waan ka xunahay, maxaa yeelay waxay umuuqataa mid aan lagaranaynin in wadan kasta, ugu yaraan dalkasta oo kamid ah Golaha Amniga ee UN-ka oo shacabkeeda ku waayey weerarada argagaxisada ee Al-Shabaab, ma jeclaan laheyd in la arko dhamaan talaabooyinka lagama maarmaanka ah ee la qaadayo. ururkan foosha xun,” ayuu yidhi Mr Kamau.
“Waxaan fileynay in dhamaan qeybaha nidaamka labada dhinac ee UN-ka, in Golaha Amniga ee UN-ka ay noqon doonaan kuwa ugu nugul arrintan isla markaana dareemi doona inta ugu badan inay culeyska ugu badan la saaro ururrada sida Al Shabaab, kuwaasoo dilay boqolaal dadka aan waxba galabsan ee Soomaaliya iyo Kenya ku nool. ”
Golaha Amniga ayaa Arbacadii diiday dalabka Kenya ee ah inay Al Shabaab u magacowdo koox argaggixiso oo hoos timaad Qaraarka 1267, oo ay ku jiraan kooxo ay ka mid yihiin Al Qaacida, Taliban iyo ISIL.
Tallaabadan ayaa ka dambaysay dib u soo noqoshada adag ee hay’adaha gargaarka ee Mareykanka iyo diblomaasiyiintii hore ee sheegay in magacaabista noocaas ah “ay dambi ka geysaneyso gargaarka bani’aadamnimada.”
Si kastaba ha noqotee, Kenya, waxay ku doodeysaa in Goluhu ku guul darreystay inuu wax ka qabto walaacyada ku saabsan sii socoshada dakhli-soo-uruurinta al-Shabaab iyaga oo ku xadgudbay gargaarka.
“Marmarsiiyo ku saabsan gaaritaanka gargaarka bini’aadannimo ee loo adeegsaday in lagu caddeeyo in uu taagnaa 1267 waa mid si gaar ah murugo u leh. Gargaarka bina-aadamnimada ee loo istcimaalay in lagu maalgeliyo laguna sii wado ururkan argagixisada ah ayaa ah wax laga xumaado, gaar ahaan maxaa yeelay waxaay qiraysaa wax aan dadka reer Kenya aaminsanahay oo aan u nahay horyaalnimada adduunka – gargaarka bini’aadannimo iyo qaxootiga. ”Ayuu yidhi Mr Kamau.
“… In aan ku guuleysanay inaan helno hal nidaam ciqaabeed dheeri ah kama horjoogsaneyso inaan sii wadno himilooyinka aan higsaneyno oo ah cidhib-tirka argagixisada waddankeena iyo guud ahaanba adduunka.”